လင်းယုန်ပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » လင်းယုန်ပုံပြင်
Posted by wunnakoko on Jun 5, 2010 in Other - Non Channelized |0comments
ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ မသေခင် ကျန်နေသေးတဲ့ အချိန်တွေအတွက် အဓိပ္ပာယ် ရှိရှိရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ။ တခါတလေ အထီးကျန်မှု စိတ်အားငယ် စိတ်ဓါတ်ကျ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီသိန်းငှက်ပုံပြင်လေးကနေဖတ်ပြီးတော့ ခွန်အားတွေ ရ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည် တွေ တောက်ပလာပါတယ်။ နည်းနည်းလောက် စိတ်ညစ် စိတ်ဓါတ်ကျ နေရင် ဒီပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ ခွန်အားတိုးနိုင်လာပါစေ။
လင်းယုန်တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၇၈နှစ်ဝန်းကျင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
လင်းယုန်ဆိုတာ ကောင်းကင်မှာ သတ္တိရှိရှိ၊ အင်အားပြင်းပြင်းပျံနိုင်တဲ့ငှက်မျိုး။
လင်းယုန် တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၄၀ လောက်ရလာတဲ့အခါမှာ အဲဒီလင်းယုန်ဟာ
ကောင်းကောင်းမပျံနိုင်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ.ရဲ့ နှုတ်သီးဟာ ကွေးလာ ပြီး ရင်ဘတ်ထိအောင် စိုက်ကျလာတယ်။ အတောင်ပံတွေဟာမခတ်နိုင်တော့လောက် အောင် လေးလာတယ်။ လက်သည်းတွေဟာ ရှည်လျားလာပြီးအစာရှာဖို. ခက်လာမယ်။ အဲဒါဟာ လင်းယုန်တိုင်းပါပဲ။
အဲဒီမှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်ခု ရှိတယ်။ တစ်ခုက ကောင်းကောင်းမပျံတော့ဘဲ သေပွဲ ၀င် ရမယ့် နေ.ကိုထိုင်စောင့်ဖို.။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈နှစ်ကို ကောင်းစွာပျံသန်းရင်းအသက်ဆက် ရှင်သန်ဖို.။ အဲဆက်ပြီးရှင်သန်ဖို.ဆိုရင်တော့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ဖြတ်သန်း ရမယ် ။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နာမည်က Pain and Difficulties “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ။
ပထမဆုံး ကျောက်တောင်ထိပ်ကြီးတွေပေါ်ကို ပျံသန်းသွားရမယ်။ အဲဒီ
ကျောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ရင် နှုတ်သီးကို ကျောက်သားနဲ.ဖဲ့ချိုးပစ်ရမယ်။တစ်ခါ နှုတ်သီး နဲ. လက်သည်းတွေကို ဆွဲခွာပြီးနှုတ်ပစ်ရမယ်။ ဘယ်လောက်များ နာကျင် လိုက်လေမလဲ။ ဘယ်လောက်များ ခက်ခဲလိုက်လေမလဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ။ အသက်ရှင်ချင်သူ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှရတာမျိုးပါ။ပြီးရင်တော့ ရက်အနည်းငယ်ကြာကြာ တောင်ထိပ်မှာနေပြီး လက်သည်းတွေ နှုတ်သီးတွေ ပြန်အသစ်ထွက်ပြီး အသားကျ လာတဲ့ အထိစောင့်ရတယ်။ ပြီးရင်တော့အဲဒီလင်းယုန်ဟာ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈ နှစ်ကို ရှင်သန်ခွင့်ရသွားပြီ။
ကျွန်တော်တို.ကလူသားတွေပါ။ ငှက်တွေတောင် အကျိုးစီးပွား တစ်ခုအတွက် နာကျင်မှုနဲ့ အခက်အခဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ကျော်နိုင်သေးရင် ကျွန်တော်တို.လို လူသားတွေက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ အရောက်သွားဖို.ဆက်လက် ရှင်သန်နေဖို. “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို. လိုချင်တဲ့ပန်းတိ်ုင်ကို အရောက်သွားဖို. တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို.တစ်တွေ အရမ်းနာကျင် ကြရမယ်။ အခက်အခဲတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ကျော်ဖြတ်ကြရမယ်။ ကျွန်တော်တို. ကျော်ဖြတ်ကြမယ်လေ။ အဲဒီ“နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်တော်တို. အတူတူဖြတ်ကျော်ကြရအောင်ပါလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကျန်တဲ့သက်တမ်းတွေကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ရှင်သန်ရဦးမှာမို့ပေါ့။ ကျွန်တော့်တို့ တွေဟာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြမယ့်သူတွေ မဟုတ်လို့ပေါ့။